Youth Leadership Forum 2018 | Myanmar Youth Empowerment Opportunities
Posted on January 14, 2018 by MYEO in Local //0Comments
Deadline : 6:00 PM, January 20, 2018
Duration : 16,17,18 February 2018
မြန်မာနိုင်ငံ၏ အသွင်ကူးပြောင်းမှုကာလတွင် အရေးပါလှသော လူငယ်တို့၏ ခေါင်းဆောင်မူ အခန်းကဏ္ဍကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်ရန်၊ လူငယ်များ၏ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု၊ ညီညွတ်မှု၊ တာဝန်ယူစိတ်တို့ဖြင့် နိုင်ငံ၏ တိုးတက်မှုအတွက် လူငယ်တို့ ၏ စွမ်းအားဖြင့် အထောက်အကူပေးနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ကာ လူငယ်ခေါင်းဆောင်မှု ဆွေးနွေးပွဲ ၂၀၁၈ ကို ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၆ရက် မှ ၁၈ ရက် အထိ ရန်ကုန်မြို့တွင် ၃ ရက်တာ ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်သည်။
လူငယ်ခေါင်းဆောင်မှု ဆွေးနွေးပွဲ ၂၀၁၈ ကျင်းပရခြင်း ၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ
– လူငယ်များ နိုင်ငံဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် ကဏ္ကအသီးသီးတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုတိုးမြှင့်နိုင်ရန်။
_ခေါင်းဆောင်မှုကဏ္ကတွင်လူငယ်များ၏ထိရောက်အကျိုးရှိသော စိတ်ကူးများကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန်။
– လူငယ်များအချင်းချင်း နားလည်မှုနှင့် ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုတည်ဆောက်နိုင်ရန်။
– မတူည်ီသည့် ကဏ္ဍအသီးသီးတွင်လူငယ်များ၏ဆွေးနွေးမှုများမှရေရှည်တည်တံ့၍ ထိရောက်သောစီမံကိန်းများ ထွက်ပေါ်လာနိုင်စေရန်။
– ခေါင်းဆောင်မှု ကွက်လပ်ကိုဖြည့်နိုင်ရန်၊အားကောင်းသောလူငယ် ကွန်ရက်တစ်ခုဖြစ်ပ်ါလာစေရန်
လူငယ်ခေါင်းဆောင်မှု ဆွေးနွေးပွဲ ၂၀၁၈ အတွင်း ဆွေးနွေးမည့် ခေါင်းစဉ်များမှာ
-မီဒီယာနှင့် သတင်းအချက်အလက်။ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းများဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်မှု( Media and information technology)
– စွန့်ဦးတီထွင်မူနှင့် ဖန်တီးမှုစွမ်းရည် (social entrepreneurship)
– အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု (vocational education)
– အရပ်ဖတ်ဆက်ဆံရေး (civic engagement)
– သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် (environment) တို့ဖြစ်ပါသည်။
လူငယ်ခေါင်းဆောင်မှုဆွေးနွေးပွဲ ၂၀၁၈ သို့တက်ရောက်ရန် မကြာမီလျှောက်လွှာများ ကို အကြောင်းကြားပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
– မိမိစိတ်ဝင်စားဆွေးနွေးလိုသည်. နယ်ပယ်တွင် ဦးဆောင်ကာ ဆာင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရပါမည်။
– သက်ဆိုင်ရာဆွေးနွေးမည့်ခေါင်းစဉ်တွင် အတွေ့အကြုံရှိသူ (သို့) စိတ်ပါဝင်စားလေ့လာနေသူ ဖြစ်ရပါမည်။
– ပွဲကျင်းပမည့် ဖဖော်ဝါရီလ ၁၆ ရက် မှ ၁၈ ရက် အထိ တက်ရောက်နိုင်ရပါမည်။
– ပွဲတက်ရောက်ပြီး သက်ဆိုင်ရာ Project တွင် တက်ကြွစွာပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရပါမည်။
Application Process: Click HERE to start your online application.
For more information, please see the Original Announcement
Invitation for Youth Leadership Forum 2018
မနျမာနိုငျငံ၏ အသှငျကူးပွောငျးမှုကာလတှငျ အရေးပါလှသော လူငယျတို့၏ ခါငျးဆောငျမူ အခနျးကဏ်ဍကို မှငျ့တငျပေးနိုငျရနျ၊ လူငယျမြား၏ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှု၊ ညီညှတျမှု၊ တာဝနျယူစိတျတို့ဖွငျ့ နိုငျငံ၏ တိုးတကျမှုအတှကျ လူငယျတို ၏ စှမျးအားဖွငျ့ အထောကျအကူပေးနိုငျရနျ ရညျရှယျကာ လူငယျခေါငျးဆောငျမှု ဆှးနှေးပှဲ ၂၀၁၈ ကို ဖဖျောဝါရီလ ၁၆ရကျ မှ ၁၈ ရကျ အထိ ရနျကုနျမွို့တှငျ ၃ ရကျတာ ကငျြးပသှားမညျဖွဈသညျ။
လူငယျခေါငျးဆောငျမှု ဆှးနှေးပှဲ ၂၀၁၈ ကငျြးပရခွငျး ၏ ရညျရှယျခကျြမြားမှာ
– လူငယျမြား နိုငျငံဖှံ ဖွိုးတိုးတကျရေး အတှကျ ကဏ်ကအသီးသီးတှငျ ပါဝငျဆောငျရှကျမှုတိုးမွှငျ့နိုငျရနျ။
_ခေါငျးဆောငျမှုကဏ်ကတှငျလူငယျမြား၏ထိရောကျအကြိုးရှိသော စိတျကူးမြားကို အကောငျအထညျဖျောနိုငျရနျ။
– လူငယျမြားအခငျြးခငျြး နားလညျမှုနှငျ့ ခဈြကွညျရငျးနှီးမှုတညျဆောကျနိုငျရနျ။
– မတူညျီသညျ့ ကဏ်ဍအသီးသီးတှငျလူငယျမြား၏ဆှေးနှေးမှုမြားမှရရှေညျတညျတံ့၍ ထိရောကျသောစီမံကိနျးမြား ထှကျပျေါလာနိုငျစရေနျ။
– ခါငျးဆောငျမှု ကှကျလပျကိုဖွညျ့နိုငျရနျ၊အားကောငျးသောလူငယျ ကှနျရကျတဈခုဖွဈပျါလာစရေနျ
လူငယျခေါငျးဆောငျမှု ဆှးနှေးပှဲ ၂၀၁၈ အတှငျး ဆှးနှေးမညျ့ ခါငျးစဉျမြားမှာ
-မီဒီယာနှငျ့ သတငျးအခကျြအလကျ။ဆကျသှယျရေးလုပျငနျးမြားဖှံ ဖွိုးတိုးတကျမှု( Media and information technology)
– စှနျ့ဦးတီထှငျမူနှငျ့ ဖနျတီးမှုစှမျးရညျ (social entrepreneurship)
– အသကျမှေးဝမျးကြောငျးမှု (vocational education)
– အရပျဖတျဆကျဆံရေး (civic engagement)
– သဘာဝပတျဝနျးကငျြ (environment) တို့ဖွဈပါသညျ။
လူငယျခေါငျးဆောငျမှုဆှေးနှေးပှဲ ၂၀၁၈ သို့တကျရောကျရနျ မကွာမီလြှောကျလှာမြား ကို အကွောငျးကွားပေးမညျဖွဈပါသညျ။
– မိမိစိတျဝငျစားဆှေးနှေးလိုသညျ. နယျပယျတှငျ ဦးဆောငျကာ ဆာငျရှကျနိုငျသူဖွဈရပါမညျ။
– သကျဆိုငျရာဆှေးနှေးမညျ့ခေါငျးစဉျတှငျ အတှအေ့ကွုံရှိသူ (သို့) စိတျပါဝငျစားလလေ့ာနသေူ ဖဈရပါမညျ။
– ပှဲကငျြးပမညျ့ ဖဖျောဝါရီလ ၁၆ ရကျ မှ ၁၈ ရကျ အထိ တကျရောကျနိုငျရပါမညျ။
– ပှဲတကျရောကျပွီး သကျဆိုငျရာ Project တှငျ တကျကွှစှာပါဝငျဆောငျရှကျနိုငျရပါမညျ။